Gobolka Catalonia Oo Noqday Dowlad Ka Madax Banaan Spain.
Tuesday October 10, 2017 - 21:25:32 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha Xukuumadda Catalonia ee wadanka Spain ayaa ku dhawaaqay in gobolkaasi noqday dowlad madax banaan kadib aftidii dhowaan la qaaday.
Madaxweynaha Catalonia oo ku dhawaaqaya gooni ugoosad
Khudbad uu caawa Jeediyay ayuu ku sheegay in gobolka Catalonia uu noqday dowlad madax banaan balse wuxuu xaqiijiyay in maamulkiisu uu ogolyahay dhax dhaxaadin caalami ah oo ay wadahadal kula gelayaan dowladda Spain.
Dowladda Curdunka ah ee Catalonia waxaa caasimad u noqonaysa magaalada Barcelona oo kamid ah magaalooyinka ugu caansan wadanka Spain.
Kumanaan katirsan ciidamada Booliska ayaa lagu arkayaa waddooyinka magaalada Catalonia waxayna ka feejiganyihiin rabshado u dhaxeeya dadka gooni ugoosadka taageersan iyo kasoo horjeeda ee ku baaqaya in midnimada Spain lasii adkeeyo.
Maxkamadda sare ee Spain ayaa ganafka ku dhufatay natiijadii dhawaan kasoo baxday Aftidii loo qaaday shacabka Catalonia waxayna ku tilmaamtay mid sharci darro ah oo khilaafsan dastuurka wadanka u degsan.
Gobolkan Hodonka ah ee Catalonia ayaa lagasoo saaraa 19% dhaqaalaha wadanka Spain taas oo aan suurtagal ka dhigi Karin in Q.Midoobe iyo Midowga Yurub ay dowlad madax banaan u aqoonsadaan.
Mukhtaar Rooboow Oo Kulan laqaatay Safiirka Dowladda Ingiriiska Uqaabilsan Soomaaliya.